FANAFIHANA TANY TSARATANANA : MIARAMILA TEO ALOHA NY AMPAHANY TAMIN’IREO DAHALO 60 LAHYLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYFANAFIHANA TANY TSARATANANA : MIARAMILA TEO ALOHA NY AMPAHANY TAMIN’IREO DAHALO 60 LAHY
FANAFIHANA TANY TSARATANANA : MIARAMILA TEO ALOHA NY AMPAHANY TAMIN’IREO DAHALO 60 LAHY
Mpitandro ny filaminana efa niala no isan’ireo nandrafitra ilay andian-dahalo nahafaty miaramila tany Brieville Tsaratanàna, afak’omaly. Nisy aza ireo voalaza fa nanao ny fanamiany manokana mihitsy
Bibidia mitafy odi-janak’ondry. Izany no azo hamaritana ireo mpitandro ny filaminana teo aloha izay isany nandrafitra ilay andian-dahalo 60 lahy nampiseho hery tamin’ireo miaramilan’ny “Détachement autonome de sécurité” (DAS) tany Brieville Tsaratanàna, afak’omaly. Nanamarina izany ny loharanom-baovao avy tamin’ilay andiana mpitandro ny filaminana nampandry tany tamin’io fotoana io.
“Nanao fanamiana mihitsy ny sasany tamin’izy ireo .Efa maty paika ihany koa ny fomba fiadin’izy ireo, toy ny nahavitany nihodidina ireo miaramila teo am-pifanandrinana”, araka ny tatitra voaray hatrany.
Vatan-dehilahy nirongo fitaovam-piadiana 40 lahy mantsy no nisakan-dàlana ireo miaramilan’ny DAS ireo ary 20 hafa avy tao aoriana. Teo no raikitra ny fifampitifirana ka iray tamin’ireo mpitandro ny filaminana no lavo tamin’ny tany noho ny tifitra nahazo azy. Fantatra fa namoy ny ainy teo noho eo ity farany. Tsy nitsahatra anefa ny fifanandrinana ka niampy 2 indray ireo mpampandry tany tratran’ny bala, ny iray teo amin’ny tongony no naratra ary ny an’ilay faharoa teo amin’ny fitombenany.
Tetsy ankilan’izany anefa dia nitohy ny fanenjehana nataon’ireo miaramila ka rotiky ny bala ny 4 tamin’ireo olon-dratsy, 5 kosa no fantatra fa naratra mafy ary voasambotra. Hatramin’ny omaly dia fantatra fa mbola tsy nitsahatra ny fikarohana ireo olon-dratsy ireo.
Araka ny torohay avy ao Brieville Tsaratanàna moa dia ny talata alina no nitrangana fanafihana nitam-basy tao an-tanàna. Nahazo baiko ny hanatanteraka fanarahan-dia ireo dahalo vokatr’izany ireo miaramila ireo kinanjo efa niandry kendritohina ireo tsy mataho-tody.
Fantatra moa fa miaramilan’ny DAS avy any Toamasina ireto niasa tany Tsaratanàna ireto mba hanome tànana amin’ny ady amin’ny dahalo izay mahery vaika. Vao herinandro vitsy mantsy izao no nitrangana fakana an-keriny intelo nisesy tao Tsaratanàna. Hatramin’izao anefa dia ireo olona ampolony voatondro ho mpiara-maisa ankolaka tamin’ireo mpaka an-keriny ireo no voasambotra.
Partager la publication "FANAFIHANA TANY TSARATANANA : MIARAMILA TEO ALOHA NY AMPAHANY TAMIN’IREO DAHALO 60 LAHY"
Ezequiel 14/01/2019 at 18:27 Repondre